न्वारान ( लघुकथा )
‘नमस्कार पण्डित बाजे ! भोलि छोरीको न्वारान छ, आइ दिन सक्नु हुन्छ?’ ‘हुन्छ आइ दिउँला नि त ! बरू कति बजे हो कुन्नि ! पण्डित प्रश्न गर्दछन् । ‘सकेसम्म सात बजे बिहान हजुर ! अरू काम पनि छ, दिउँसो सबेरै सकिए पछि धन्दा नै छिनिन्छ बाजे ।' पण्डित स्वीकृति सूचक मुन्टो हल्लाउँछन् । पण्डित बाजेलाई नमस्कार गर्दै रामबिर घर जान्छ ।
भोलिपल्ट पण्डितलाई दिएको वचन पुरा गर्न र छोरीको न्वारानको फुरफुरले गर्दा रामबिर बिहान चार बजेदेखि नै उठेर पूजा सर्दाम मिलाएर ठिक पार्छ । तर ९ बजि सक्ता पनि पण्डितको पत्तो फाँट नपाएपछि पण्डितले बिर्से कि भन्ठान्दै बोलाउन घर जान्छ । तर अघि नै जानु भएको भन्ने पण्डितनी बज्यैको उत्तरले निराश हुन्छ । छटपटीले पिरोलिएर भौँतारिँदै हिँड्दै गर्दा एउटा भट्टीमा उसको आँखा ठोक्किन पुग्छ अचम्मित हुँदै । बाजे त २-३ गिलास लगाएर नटुङ्गिने गफ गरेर पो बसेका रहेछन् । रामबिरलाई देखेपछि ‘किन आयो होला ?’ भन्ठानेर निकैबेर घोरिएपछि उसकी छोरीको न्वारानको लागि बोलाएको कुरो बल्ल सम्झन्छन् । अनि पण्डित जगन्नाथ लर्बरिँदै बोल्छन् ‘ए ह्यामबीरे, तेइ छोरीको न्वायान ह्यै छ है ! मइले त हुसुक्कै बिसेको ! लौ हिँड् ।‘
आफ्नी पत्नीको सुतक फुकाइ दिएर चोख्याइ दिने पण्डित बाजेको चारित्रिक शुद्धता देखेर अचम्म मान्दै रामबिरे उनको पछि-पछि पाइलो चाल्छ घरतर्फ ।
( Source of photo: Click here )
मैले 'प्रेतकल्प' भर्खरै जसो पढेँ । तपाईँनेर गरेको वचन अनुरूप यो पत्र लेख्तै छु । पुस्तक केही कुरामा अरू उपन्यासहरूभन्दा पृथक् छ । कुनै परिच्छेदमा प्रथम र कुनैमा तृतीय पुरुष प्रयोग हुनु फरकपना हो । यस्तै परिच्छेदपिच्छे टिप्पणी फरक जस्तो लाग्छ । टिप्पणीहरूले उपन्यासका प्रकरणहरूलाई जीवन्त पारेका छन् ।
पण्डित बालकृष्ण र उसको परिवारले रत्ति नडगी एकपछि अर्का हिम्मतिला कार्यहरू गर्नु , समाजबाट सहमति प्राप्त हुँदै जानु र सफलता समेत प्राप्त हुँदै जानु चमत्कार जस्तै लाग्छ । त्यो चमत्कारै चमत्कारको भुवँरी कतिखेरसम्म चल्ने हो शङ्का पनि लाग्छ । चन्द्र शमशेरजस्ता निरङ्कुश शासकका अगाडि आर्य समाजी प्रचार गर्नु, चन्द्र शमशेरको निम्तो अस्वीकार गर्नु, जातपातको कुरा मेटाउन खोज्नु , अझ अश्विनीको संरक्षण गर्नु, विष्णुभक्तलाई नरम बनाउनु, शिक्षाको ज्योति छर्ने कार्य गर्नु, चेतना फैलाउने कार्य गर्नु एकपछि अर्का जादुगरी जस्ता लाग्ने कार्यहरू हुन् । अझ विधवा विवाह र अन्तरजातीय विवाह त्यसबेलाका परिवेशमा अति क्रान्तिकारी कार्यहरू हुन् ।
यस उपन्यासले दुइटा शिक्षा दिन खोजे जस्तो लाग्छ - पहिलो, उपन्यासका कथानक तथा घटनाक्रमहरूले समाजमा जागरण ल्याउन सङ्गठनको आवश्यकता औँल्याउनु हो भने दोस्रो समाजलाई बदल्न व्यक्ति पर्याप्त हुँदैन, राज्यको कानुन पनि सहयोगी हुन सक्नुपर्छ भन्ने हो ।
'क्रान्तिको महान् गीत झैँ', 'फाँटको साँढे झैँ', 'असारे फूल झैँ' जस्ता सुन्दर उपमाहरू पाइने यो कृति सूक्तिमय वाक्यहरूले अझ सुन्दर बनेको छ र मार्मिक पनि छ ।
अति कथ्य 'मन्नोदरी', 'भे', 'विधुवी' सामान्य पाठकका लागि उपयुक्त जस्तो लागि हाले पनि अनेपाली 'दोगला' खट्कँदो शब्द हो । 'टाउचे', 'टेठा', 'खलिखप्पर', 'खुल्ली' जस्ता अप्रसिध्द शब्द भाषिका भए पनि सामान्य पाठकका दिमागभित्र घुस्न गाह्रो मान्छन् । 'कथाकारको टिप्पणी' मा पुनरुक्ति पाइन्छ भने आदरगत त्रुटि पनि पाइन्छ ।
बालकृष्ण थुनिएपछि उसको बाली स्याहारिदिने को थिए ? बाहिर खुलेर समर्थन गर्न नसके पनि भित्रभित्र सघाउन खोज्ने सार्कीहरू थिए कि अरू कोही ? विष्णुभक्तको छोरा किन त्यति साह्रो पलायन भएको ? त्यस्ता साहसिक कार्य गर्न सक्ने बालकृष्ण किन त्यति विघ्न निरीह देखिएको ? कुराहरू राम्ररी खुल्न सकेका छैनन् ।
पुस्तक पढिरहँदा हृदय चन्द्रसिंह प्रधानको उपन्यास 'स्वास्नीमान्छे' र कृष्ण धरावासीको कथा 'झोला' को सम्झना आउँछ ।
कृति उपन्यास हुनाले टिप्पणीलाई 'कथाकारको टिप्पणी' नभनेर 'उपन्यासकारको टिप्पणी' भन्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
प्रगतिवादी लेखक भएर पनि यौन सन्दर्भ प्रस्तुत गर्नु भएको रहेछ । यस्तै अश्लील शब्दको पनि प्रयोग पाइन्छ ।
'दु:खको नवीकरण' भन्ने परिच्छेद नराखेकै भए राम्रो हुन्थ्यो । नागरिकहरू निराश भएको अवस्थामा झन् हतोत्साहित पार्न हुन्नथ्यो ।
पुस्तक रोचक छ । सुरुमा प्रेरक छ र अन्त्यमा निराशाजनक ! मेरो विचारमा होनहार लेखक तपाईँले क्षतिपूर्तिमा अर्को उपन्यास लेख्नुपर्छ; बालकृष्णकै शृङ्खलामा वा एउटा गतिलो पात्र राखेर ! प्रेरक र उत्साहवर्ध्दक उपन्यास लेख्नुपर्छ ।